चस्मा पाएर दंग | NayaPusta
About us हाम्रो बारेमा authors list Contact us Full width Page / Post Elements Sample Page Sample Page Sample Page sitemap इ–खेल निःशुल्क खेल बुद्धि परीक्षा काठमाडौं वाहिर प्रशारण सहकार्य टिभी तस्बिर मैले खिचेको तस्विर मूल पाना रेडियो सिर्जना/कला
» विटबक्सर डेभिड
» शान्ताको मुक्त यात्रा
» त्रिशुलीमा पौडी
» निरन्तर अन्याय
» घरको काम
» सितलको घर
» विद्यालय बनेपछिको खुुसी
» प्रतिमाको प्रतिभा
» चस्मा पाएर दंग
» कल्पनाको साइकल व्यापार
नयाँ पुस्ता वार्ता
मैले खिचेको तस्विर
Go To.. मूल पाना समाचार चिनारी - नयाँ पुस्ता वार्ता सिर्जना - सिर्जना/साहित्य - सिर्जना/कला ठट्टा-मजाक रेडियो टिभी तस्बिर - मैले खिचेको तस्विर इ–खेल - बुद्धि परीक्षा - निःशुल्क खेल About us - हाम्रो बारेमा Activities - गतिविधी सम्पर्क
Home » Activities » चस्मा पाएर दंग
चस्मा पाएर दंग
May 17, 2017 11:20 am Category: Activities, समाचार Leaveacomment A+ / A-
बाँके टिटिहिरियाकी कक्षा १० मा अध्ययनरत सुनिता थापा लामो समय देखि आँखासम्बन्धी समस्या भोग्दै आउनु भएको छ ।
सुनिताले बाया आँखाले देख्न सक्नु हुन्न । दाया आँखाले पनि नजिकको बस्तु देख्न र पढन गाहे हुने समस्या छ ।
गाउँमै आफ्नै बिद्यालयमा आँखा शिबिर संचालन हुने खबरले उत्साहित हुनु भएकी थापाले निशुल्क आँखा शिबिरमा आँखा परिक्षण गराउनु भयो । परिक्षणपछि चिकित्सकहरुले थापालाई चश्मा लगाउने सल्लाह दिदै चश्मा दिए । चश्मा लगाए पछि थापालाई नजिको देख्न र पढ्न सहज भएको छ ।
सुनिता थापा कक्षा १०, बाँके टिटिहिरिया
कस्तो भन्दा टाढाको बस्तु चाहिँ हेर्नुहुन्न रे अनि फरकै छ लगाउँदा र नलगाउँदा त ।
अनि तपाईँलाई के इजि भएको छ अहिले ?
भा छ ।
अब तपाईँ पढन राम्रोसगँ सक्नु हुन्छ?
सक्छु होला ।
सुनिताजस्तै उहाँका साथीहरु मनिषा बिक लाई पनि आँखा दुख्ने र नजिकको बस्तु राम्रोसंग देख्न नसक्ने समस्या थियो ।
तर मनिषाले यसअघि आँखा परिक्षण गराउन पाउनु भएको थिएन । मनिषाले आफ्नै बिद्यालयमा आयोजना गरिएको शिबिरमा पहिलो पटक आँखाको परिक्षण गराउनु भयो ।
चिकित्सकहरुले मनिषालाई चस्मा समेत दिए पछि मनिषा मख्ख पर्नु भएको छ । चश्मा लगाए पछि मनिषाको आँखा दुख्ने र नजिकको बस्तु राम्रोसंग देख्न नसक्ने समस्या समाधान भएको छ ।
मनिषा र सुनिता जस्तै उहाका साथीहरु तृर्सना योगी , रोशन शाही , सन्ध्या परियार र दक्षिणा बुढाले पनि आफ्नै गाउको बिद्यालयमा आयोजना गरिउको शिबिरमा आँखा चेक जाच गराएर चश्मा लिनु भएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका बिपन्न समुदायलाई सहज रुपमा आँखा रोगको उपचार सेवा पु¥याउने उद्देश्यले बाँकेको टिटहरियामा नि ः शुल्क आँखा शिविर संचालन गरिएको हो । ती मध्ये ३ सय ३६ जना विद्यार्थीहरु थिए । यहाँ जम्मा एक हजार एक सय ६ जनाले आँखा परिक्षण गराएका छन् ।
चस्मा पाएर दंग Reviewed by nayapusta on May 17 . बाँके टिटिहिरियाकी कक्षा १० मा अध्ययनरत सुनिता थापा लामो समय देखि आँखासम्बन्धी समस्या भोग्दै आउनु भएको छ । सुनिताले बाया आँखाले देख्न सक्नु हुन्न । दाया आँखाले बाँके टिटिहिरियाकी कक्षा १० मा अध्ययनरत सुनिता थापा लामो समय देखि आँखासम्बन्धी समस्या भोग्दै आउनु भएको छ । सुनिताले बाया आँखाले देख्न सक्नु हुन्न । दाया आँखाले Rating: 0
कल्पनाको साइकल व्यापार...प्रतिमाको प्रतिभा...
शान्ताको मुक्त यात्रा
दाङ जिल्लाको घोराही बजारमा छ नेपाली सैलुन । त्यही सैलुनमा शान्ता चौधरी ग्राहकको दारी काट्दै... पुरा पाठ»
रुपन्देहीको शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयका २८ जना दृष्टिविहीन विद्यार्थी ब्रेल लिपीमा... पुरा पाठ»
बेशिसहर नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा पर्छ १३ वर्षकी सितल तामाङको घर । आफ्ना भाइबहिनी ११ वर्षिय... पुरा पाठ»
यो खुसी यो उमगं आफ्नो विद्यालयको भवन बनेपछिको हो । २०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्प परि... पुरा पाठ»
मेरो नाम चाहिँ प्रतिमा शेर्पा हो, म चाहिँ यही रोयल नेपाल गल्फ कोर्स भित्र नै बस्छु, म चाहिँ एउटा... पुरा पाठ»
ताजा टिभी श्रृंखला
ताजा रेडियो श्रृंखला
शुक्रबार र शनिबार सधैं हाम्रो बार
१) एनटिभी प्ल्स (हरेक शुक्रबार राती ८:३० बजे)
२) रेडियो सगरमाथा (हरेक शनिबार साँझ ६ बजे)
काठमाडौं बाहिरबाट प्रशारण :
पुरा पाठ »
सर्वाधिकार © २०१३–२०१४ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (NEFEJ) | वेब साईट सिर्जनाः DigiMed